Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliya oo Faah faahiyay weerarkii UNDP – SBC
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliya oo Faah faahiyay weerarkii UNDP
Posted by Webmaster on June 19, 2013 Comments
Wasiirka arimaha gudaha Dowlada Federaaliga Soomaaliya C.kariin Xuseen ayaa faah faahin ka bixiyay weerarkii maanta ka dhacay xarunta UNDB ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka oo saxaafada kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerarkii dhacay ay ku dhinteen ku dad gaaryaa 15 qof kuwaas oo isugu jiray Shaqaale Ajaabiib ahaa oo ku jiray dhismaha la weeraray.
Waxa uu intaasi ku daray wasiir Guuleed in ajaaniibta ku dhimatay dagaalkaasi ay gaarayaan 4 qof, 7 qofna ay ka mid ahaayeen kooxaha weerarka geystay halka 4 kalena ay ka mid ahaayeen ciidanka dowlada ee ilaalada ka hayay goobtaas.
Inkastoo dhimashadu intaas uu sheegay wasiirku ka badantahay ayaa hadana waxaa uu wasiirku tilmaamay in 4ta qof ee ajinabiga ah ee dhintay ay ku jireen laamaha ka shaqeeya amaanka xaruntaas.
Dadrayid ah ayaa la rumeysan yahay weerarkii maanta in ay ku geeriyoodeen taas oo uusan wasiiku soo hadal qaadin inkastoo aan xaqiiqo dhab ah loo heynin.
Inkastoo aysan aheyn markii ugu horeysay oo weerar ceynkan oo kale ah uu ka dhaco muqdisho hadana waxa uu noqonayaa midkan kii ugu horeeyay oo goob dowladeed oo ay kusugan yihiin ciidan isku dhafan lagu qaado lagulana wareego xarunta Hay’ad ka tirsan Qaramada Midoobay ay ku howlgasho.